Ogaden News Agency (ONA) – Dagaallo Khasaare Dhaliyay oo Udhaxeeya Canfarta & Tigreega.
Dagaallo Khasaare Dhaliyay oo Udhaxeeya Canfarta & Tigreega.
Wararka naga soo gaadhaya xuduuda udhaxaysa Gobolada Tigreega iyo Canfarta ee wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya dagaalo lagu hoobtay oo maalin nimadii shalay oo Khamiis ahayd kadhacay xuduuda labada Gobol.
Sida xogta aan kuhelayno dagaal culus ayaa ciidanka amaanka ee Gobolka Tigrey iyo dadka shacabka ah ee qoomiyada Canfarta kudhex maray xuduuda ay wadaagaan labada Gobol, waxaana lasoo tabinayaa khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo kala gaadhay dhinacyadii dirirtu ay dhex martay.
Dagaalada ayaa lasheegayaa in ay kabilowdeen tuulada Danti oo katirsan Dagmada Megalle waxaana inta laxaqiijiyay kudhimatay 9 qof oo Tigree ubadan waxaana sidoo kale jira dhaawac aad ubadan oo sida lasheegay qaarkood ay khatar yihiin.
Dagaalka ayaa lasheegayaa in uu bilowday kadib markay ciidanka amaan kusheega ee Gobolka Tigreegu dileen labo wiil oo walaalo ah, waxaana sida lasheegayo duulaan qaaday aabaha dhalay labada wiil oo isna soo dilay 3 kamid ah ciidanka amaanka ee Gobolka Tigreega.
Intaas kadib waxaa weerar balaadhan soo qaaday ciidankii Tigreega waxaana lagu soowaramaaa in ay shacabka Canfarta kala kulmeen difaac adag oo ayna filaynin, waxaana lasheegayaa in ciidankii weerarka ahaa ee Tigreega laga dhigay mid dhumay iyo mid dhaan raacay.
Gas Axmed oo udhaq dhaqaaqa arimaha xuquuqul insaanka ee shacabka Canfarta oo warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in ciidanka bahalka ah ee qoomiyada Tigreegu ay weerareen dad shacab ah oo udhashay qoomiyada lagumaysto ee Canfarta, wuxuuna mas’uulku sheegay in ciidanka Tigreegu ay dhowr jeer oo hore weerareen shacabka Canfarta.
Dhinaca kale qoomiyada kibirka kucaanbaxday ee Tigreega ayaa gabi ahaanba lawareegtay dhulka cusbada qaniga ku ah ee qoomiyada Canfarta, waxaana sixoog ah dhulkaas gacanta ugu haya ciidan uu Tigreegu leeyahay.